Madda banaa marsaa bootstrap hojjachuuf si tajaajilu - OROMO ICT
Madda banaa marsaa bootstrap hojjachuuf si tajaajilu
Abdisa Bencha Jara March 14, 2017
kabajamtootaa fi jaalatamtoota oromo ict akkam jirtu? nageenyi badhaadhaa? ni yaadattu yoo tahe fuula keenya facebook irratti, marsaan bootstrap hojjachuuf kan isin gargaaru, madda banaa/open source/ tokko isiniif maxxansina jennee turre. Nutis waadaa keenya eegnee, maddiocha kana qabannee dhufnee jirra.
Isinis hidha itti aanu kana irraa buufachuudhaan, akka fedhii keessaniitti itti fayyadamuu dandeessu. Madda banaa kana isins github gubbaa irraas akka salphatti argachuu dandeessu.
As tuqii Naqadhu
Madda banaan kun gosa zip tahee jira. yeroo unzip gootan, jecha darbii oroict jedhu itti galchuu hin dagatinaa. kana malees, yeroo itti fayyadamtan rakkoo isin qunname kamiifuu, nu gaafachuu hin sodaatinaa. Hamma dandeenyeen deebii isaa isiniif kennuu ni yaalla.
PREVIOUS POST Previous post: Bilbila Android isin Jalaa Saamsame Osoo Deetaan isin jalaa hin badin akkamitti Banattu[Unlocking Android Smart Phone Pattern without losing Data]: OROMO ICT
NEXT POST Next post: What are the F1 through F12 keys?: OROMO ICT
Maxxansaalee Haaraa: OROMO ICT… Information is Power (9,005)
Amma Booda Itoophiyaa keessatti qafoo argitan fayyadamuu hin dandeessan (6,429)
Icciitii Bilbila keessanii kan namni hedduun hin beekne! (4,996)
OROMO ICT -Oromo Technologies Center (3,993)
Total Visit : 782272
Total Hits : 1138927